Sintomy ny kinova vaovao amin'ny Google Play Games 2.0 | Androidsis
Google Play Games 2.0 miaraka amin'ny fampandrenesana mitsingevana, interface tsara nohatsaraina sy bebe kokoa [fampidinana APK]
Google dia nanomboka hamoaka fanavaozana hafa amin'ny Google Play Games, ary izay hitondra ny kinova 2.0 miaraka amin'ny fanaraha-maso fampandrenesana vaovao, XP na laharam-pahamehana ary fanovana vaovao vitsivitsy eo amin'ny sehatry ny mpampiasa. Ankoatra ireo fampandrenesana mitsingevana vaovao ireo dia hahita karatra vaovao isika amin'ny «Milalaova ankehitriny» izay hampianarina ny mpampiasa azy amin'ny traikefa niainany ary ohatrinona no ilain'ny ambaratonga avo lenta. Hevitra mahaliana iray avy amin'ny Google sy ny serivisy hafa toa ny Steam izay mila manome fahafaham-po ireo mpilalao izay mandany fotoana fialamboly mankafy lalao ao amin'ny Play Store.
Fanatsarana ankapobeny vaovao vitsivitsy ao amin'ny Google Play Games 2.0 izay hanome lalao bebe kokoa an'ity serivisy Google ity izay nantitranteriny manokana satria manatrika ny iray amin'ireo endrika manandanja indrindra isika ankehitriny rehefa manana finday avo lenta sy tablette ianao. Ireo lalao video izay hita ao amin'ny Play Store dia mampiseho ny fahasalamana salama amin'ny Android amin'ity lafiny ity sy ny fomba tian'ny Google hampiroborobo azy ireo amin'ny Google Play Games.
Hahita zava-baovao ao anaty boaty izahay misy tabilao misaraka ho an'ny fanasana, iraka sy fanomezana. Teo aloha ity fizarana boaty ity dia natokana ho an'ny mpanasa lalao fotsiny. Ankoatry ny efijery "Play Now" vaovao sy ny boaty fanoratana vaovao, dia misy tweaks roa ho an'ny interface an'ny mpampiasa. Ny safidy izay teo amin'ny tontonana fitetezana fizahana hijerena lalao vaovao amin'ny alàlan'ny fivarotana, dia nakarina amina karatra iray ao amin'ilay faritra «Fikarohana izay hitondra anao any amin'ny Play Store.
Fizarana iray hafa izay nohavaozina kely ihany koa dia ny "Lalao ko". Novana ny filaharan'ny takelaka ary natao kely kokoa ny karatra "All My Games", mamela anao hahita lalao bebe kokoa amin'ny indray mipi-maso. Raha ny interface «Mpilalao» dia mampiseho ny haavon'ny mpilalao hafa mampiasa karatra sasany aseho tsara kokoa.
Azonao atao ny misintona ny Google Play Games 2.0 eto ambany ary mankafy ny vaovao mifandraika amin'ny fanatsarana ankapobeny momba ny serivisy Google ho an'ny lalao anananao amin'ny fitaovana Android.
Sintomy ny APK Google Play Game 2.0
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » apk » Google Play Games 2.0 miaraka amin'ny fampandrenesana mitsingevana, interface tsara nohatsaraina sy bebe kokoa [fampidinana APK]
Izao no fotoana hividianana ny Samsung Galaxy Note 3 amin'ny vidiny tsara indrindra amin'ny Phone House
Fikirana Google Now: #OKGoogle tsy mahita teny vitsivitsy, inona no tokony ataoko?